“ပြည်သူ့အတွက် ပီဒီအက်ဖ်”… – PVTV Myanmar
V1-ရဲစိတ်ဖြင့် ဖွဲ့ခဲ့သနော် ဤတပ်မတော် PDF ခေါ်
သွေးသစ်တို့ရုန်းကြွပေါ် ဤတပ်မတော် PDF ခေါ်
CHO : (မြန်မာပြည်ကယ်တင်မည် ငါတို့တပ်မတော်ချီလာပြီ
ရန်သူဆီချေမှုန်းမည် ငါတို့ တပ်မတော်ချီလာပြီ
ဖက်ဒရယ်ပြည်တို့ဦးတည် PDF တပ်မတော်ချီလာပြီ)
V2-အိုးစားဖက်စိတ်ဖြင့်နော် ဂျန်ဇီးလူတော် ညီနောင်ရဲဘော်
သွေးသားအရင်းပေါင်းဖက်ဖော် ဤတပ်မတော် PDF ခေါ်
V3-တိုင်းရင်းသားမိဘအပေါ် ရိုကျိုးပူဇော် PDF နော်
ရိုင်းပင်းအားချိတ်ဆက်သော် ဤတပ်မတော် PDF ခေါ်
Like – 46K Share – 7947
Zaw Htoo says:
သီချင်းကို လန်းလန်းလေးရေးကြပါဟ ဥပမာပေးရရင် Urban guerilla post က မြို့ပြပျောက်ကြား သီချင်းလိုမျိုး
Santhu Basneth says:
May​ God bless PDF🙏🙏
ပြည်သူ့တပ်မတော် PDF တိုက်ပွဲတိုင်းအောင်မြင်ပါစေ သပြေခက်နဲ့တောင်းဆုချွေ
2021-07-05 at 9:32 PM
ဒီတစ်ခါ တင်တဲ့သီချင်း အကြိုက်ဆုံးပဲ…
PDF တပ္မေတာ္ ေဘးကင္းပါေစ
အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္ 🤝💪
အရမ္း အားေပးတာ၊ျပည္သူ ေတြ ေအာင္ျမင္ ဖို႔ PDF ကို ေစတနာထက္ပိုၿပီး ဝန္းရံေပးၾကပါ။ႏိုင္ငံ အာဇာနည္ေတြ
Ram Thleng Kheng Lawt says:
NUG up up up
ေတာင္တန္း ေတာင္တန္း says:
ပြည်သူ့အချစ်တော် pdfတပ်မတော်.. အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်………
Lu Thwe says:
သီချင်း အဆင့်မြင့်တယ် ဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိတယ် ။ ရန်သူဆီ ချေမှုန်းမည် ဆိုတဲ့နေရာမှာ ရန်သူဆီအစား အာဏာရှင်လို့ သာပြောင်းနိုင်ရင် perfect ပဲ။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ဒင်းတို့ရဲ့စစ်သီချင်တွေနဲ့လုံးဝကွဲပြားပြီး ထာဝရရန်သူဘာလဲဆိုတာ Target လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားလို့ပါပဲ။ တေးရေသူရဲ့အနုပညာကိုလေးစားပါတယ်
ယွမနေနဲ့ ကိုစိုင်းထူးကျော်ရေ says:
2021-07-06 at 2:37 AM
Thanks to the composer. က လို့ကောင်းတယ် သံစဉ်လေးက
ဥယျာဥ် မှူး says:
2021-07-06 at 11:58 AM
💪💪💪💪💪 PDF တွေ
အားပေးပါတယ် ဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ် pdf တွေ အမြဲအောင်မြင်ပါစေ 🙏🙏🙏👌👌👌💪💪💪
Nanmyint Mor says:
တိုက္ပဲြတိုင္းမွာ ေအာင္လံထူႏိုင္ပါေစ အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္
KNU KIA PDF
Bu Pheh says:
2021-07-06 at 8:06 PM
Founded in 2021?
Lin Thidar Nyo says:
2021-07-06 at 8:08 PM
ဘယ်သူမွေးမွေး တို့ကလေးတွေ အရမ်းချစ်တယ် သားတို့ KIA KIO PDF ပေါင်းစုညီညွတ်သော တပ်တော်ကြီး အောင်ရမည်
PDF တွေ ဘေးကင်းပါစေ 🙏🙏🙏
Min Min Minmin says:
ျပည္သူ ညီၫႊတ္စြာ အျမန္စည္းလုံးမွ ကူတဲ့သူ က ကူ တိုက္တဲ့ သူက တိုက္
Lai Laiwynn says:
PDF တပ္မေတာ္ ႀကိဳဆိုသည္ ….
Ko Zaw Hane says:
2021-07-07 at 7:21 PM
2021-07-08 at 4:09 PM
Soe Htaik says:
2021-07-09 at 4:35 PM